MADADAALADA – Radio Damal
Haweeney Hal Guri Kula Nool Ninkeedi Horay Iyo Nin Cusub Ay Guursatay.
Sheeko waalan oo ka dhacaday Mareykanka khaasatan magaalada New York, ayaa haweenay waxey la nooshahay nin ay dhawaantan guursatay iyo ninkeedi hore oo ay sanado badan is qabeen balse 4 sano ka hor kala tageen. Haweeneydan ayaa lagu magacaaba Carol E. Levy waana qof ka ganacsata iibinta guryaha iyo dayactirkooda oo hanti balaayin dhan iska leh. [expander_maker more="Read more" less="Read less"]Waxey isku dhaleen laba gabdhood. Intey qabtay ninkeedi hore ayay isla gateen guri qaali ah oo bartamaha magalada ku yaala qiimihisuna yaha $18 Million. Si kastoo ahaataba jaceylkoodi ayaa meel wanaagsan gaari waayay oo waxey go'aanswadeen iney is furaan, hadaba sida caadada aha labada qof markey is furaan waa ay kala tagaan oo kala guuran. Taas ayaa noqon mid Carol iyo ninkeedi hore Chris Lipmann ku kala tagaan oo guriga ay isla gateen ayaa kala kaxeen waayay, oo Carol ayaa diiday iney gado guriga si qof kaste u qaato qeybtisa, Chris-na wuxu diiday inuu ka guuro guriga wuxuna sugaya in inta ay ogalaneyso Carol gadida guriga. Taas waxa kasii daran Carol ayaa guursatay nin cusub oo lagu magacaabo Joel Goron oo asna isla gurigas kula nool waxeyna u leedahay gabar yar oo ay dhawaan dhashay. Markey is furaayeen Carol iyo Chris ayaa maxkamada waxey ku amartay in guriga ku hesheeyan ku wada noolanshihisa hadii kalena iska gadan oo lacagta qeybsadan. Guriga oo laba dabaq ka kooban ayaa hoos waxa dagan Chris korna Carol, ninkeeda cusub, iyo sadaxdeeda ciyaalka ah. Balse waxay wada qeybsadan kurshiinka kaasoo ka dhaxeeya. Carol ayaa sheegtay in Chris oo cuntadiisa ku qorto xarafka X sida khudaarta iyo raashinka. Carol ayaa go'aansatay 4 sano kabacdi iney gado guriga ayadoo beec ku dooneysa hada iyo qiimo gaaraya $20 Million, lacagtas Chris wuxu ka heli doona 45%.[/expander_maker]
Kim Iyo Kanye West Oo Ka Qeyb Galay Dabaaldaga Dhalashada John Legend.
Lamaanaha Kim Kardashian iyo Kanye West ayaa ka qeyb galay dabaaldaga dhalshada fanaanka John Legend. Lamaanaha oo kusoo dhaweeyay ayagoo is shuminaya. Dhalashada fananka ayaa aheed bishi Disembar ee sanadkii tagay balse wuxu u dabaal dagay Khamiisti lasoo dhaafay. Xafladan oo fanaanin badan kasoo qeyb galeen ayaa ka dhacaday New York.
Justin Beiber Oo Lagu Qarxiyay Sawir Xayaysiis U Calvin Klein U Sameeyay.
Heesaga da'da yar ee Justin Beiber ayaa lagu fadeexeeyay sawir uu u galay shirkada dharka ee Calvin Klein. Sawirkan oo feera qaawanyahay asagoo qaba kastuumada raga xirtaan ayaa la siidayay maalmo ka hor kaaso tusanayan inuu aad murqa weyn yahay oo jirkisana dhisan yahay. Hadaba maanta ayaa Breathe Heavy heshay sawirka asalkisa intan la qurxin, sawirka ayaa tusinaya farqiga weyn oo u dhaxeya key siideysay Calvin Klein iyo nuskhada asalka aheyd. Fananka ayaa tan aad ugu fadeexowbay oo ku tilmaamay inaan sawiradidsa la qurxin.
Lamaane Military-Ga Mareykanka Ka Tirsan Oo Laga Baniday Xaflad Oroos Obama Daratiis.
Sheeko aan waji fiicneyn ayaa ku dhacday lamaane ciidanka Mareykanka ka tirsan kadib markii laga ceeriyay meeshey isku guursanayeen, taasoo Obama loo baneeyay inuu ku ciyaaro Golf. Natalie Heimel iyo Edward Mallue Jr ayaa aad uga xumaaday arintan markii meesha laga ceeriyay daqiiqado ka hor intuusan arooskooda bilaaban taasoo ay waqti hore qoondeysteen meeshas iney isku aroosan oo ku taala [expander_maker more="Read more" less="Read less"]Hawaii halkasoo madaxweyne Obama ku dalxiisayo haatan. Walaasha Natalie ayaa sheegtay iney ku noqotay arin aad u fool xun oo waxey qorsheyn dhan isku badaleen daqiiqado gudahood. Arooska ayaa ka dhacay meel ka baxsan meesha uu Obama golf ku ciyaarayay. Obama ayaan sheekadan ka warheyn markii loo sheegayna uu horay ka wacay lamaanaha halkasoo uu ka raali galiyay waxa ku dhacay una tahniyadeeyay arooskooda.[/expander_maker]
Selena Gomez Oo Masaajid Abu Dhabi Ku Yaal Ku Edebdarootay.
Fanaanada heesta heesaha nooca pop ee Selena Gomez ayaa anshax xumo ka muujisay mar loo ogalaaday iney booqato masaajid ku yaal Abu Dhabi oo lagu magacaabo Sheikh Zayed Mosque. Sawir ay soo galisey Instagram ayaa muujinaya ayadoo qaawineysa lugteeda marey isku dhex sawirtay masjidka. Sidoo kale sawir kale ayay soo dhigtay ayadoo la sawiran Kendall Jenner, Gigi Hadid, iyo Cody Simpson.
Kim Kardashian Iyo Kanye West Oo Xanaaqsan Kadib Markey Uur Yeelan Weysay.
Lamanaha caanka ah ee Kanye West iyo Kim Kardashian ayaa sheegay iney aad u xanaqsaniyihin kadib markey Kim uur yeelan weysay mudo dhan 9 bilood dhan ay wax uur ah yeelan weysay. Kim ayaa u taktay dhakhtaro badan kuwaaso u sheegay ineysan uur yeelan karin oo adkaneyso sidey uur u yeelan laheyd. Waxa lasoo sheegaya in North West uu mucjiso ku noqday markey uurkisa yeelatay. Sawirkan hoos ayaa laga qaaday mar ay u tageysay talaadadii lasoo dhaafay dhakhtar Bev Hills xaruntisa ku taal.
Lil Wayne Oo U Digay Birdman Haduusan Siideyn Albumkiisa.
Heesaga Lil Wayne ayaa u digay madaxa Cash Money ee Birdman asagoo sheegay inuu maxkamad lasoo istaagi doono haduusan sii deyn albumkiisa cusub. Cash Money oo ah shirkada maamusha heesaha Lil Wayne isla markana beec geysa ayaa ku dhagan albumkisa Carter V mudo dheer. Labadan rapper ayaa hadallo kulul is dhaafsanayay isbuucyadii lasoo dhaafay. [expander_maker more="Read more" less="Read less"]Lil Wayne ayaa sheegay in album-ka uu diyaar yahay oo in lasii daayo kaliya dhimantahay, halka uu Birdman sheegayo in waxayabo badan ay ka dhimantahay albumka oo u baahan in laga shaqeeyo. Labada fanaan ayaan hada isla hadlin, waxana ilo ku dhow sheegayan in Lil Wayne uu ku adkeesanayo sii deynta albumka uuna sheegay in uusan rabin soo celinta saaxiibtinimadooda ka hor intan albumka lasiideyn.[/expander_maker]
Lamaane Somali Ah Oo Isdaba Maryeeyay 4 Milyan Oo Dollar, Mareykanka.
Yasmin Ali iyo ninkeeda Ahmed Mohammed ayaa lagu soo oogay dambiyo is dabamaryeen ah kadib markey si sharciga ku lid ah ay u lunsadeen. Lamaanahan ayaa iska leh xarunta xanaanada caruurta ee ku taal MINNEAPOLIS laguna magacaabo Deqo Day Care. Gobolkas ayaa lacag ku bixiya xanaanada caruurta hadey hooyadu ay shaqeyso wax ka yar 20 saac oona leedahay dakhli mucayan ah. [expander_maker more="Read more" less="Read less"]Hadaba xanaanada Deqo Family Center ayaa diiwan galisay hooyooyinka Somaliyeed ee ku sugan magaladas waliba kuwa ciyaalka badan iska leh oona ka dhigtay kuwo ayaga ku shaqeeya halka ay mala awaashay waraaqo tusinaya iney lacag siiso oo ay u shaqeeyan hooyoooyinka Deqo Family Center. Baaritaan kadib ayaa lasoo ogaaday beenta iyo isdaba maryeyeen shirkada lamaahan ay asaaseen. Waxa hada xabsiga dhex fadhida Yasmin Ali halka ninkeedana baaritaan xoog leh uu ku socdo. Waxa sidoo kalena baritaan ku socdaa niman cadaan ah oo la shaqeynayay. Gobolkaas ayaa balan qaaday iney soo xiri doonan dadka musuqmaasaqun ku lug leh oo dhan isbuucyada soo socda.[/expander_maker]
Instagram Oo Lagu Qiimeeyay $35 Billion.
Bilowgii bishan ayey aheed markii ay soo baxeen baaritaan sheegaya in Instagram uu kor u dhaafay Twitter halkasoo uu gaaray 300 million oo qof halka Twitter uu noqday 284 million. Instagram ayaa haatan shirkada Citigroup ku qiimeysay $35 billion taasoo u dhow laba jibaar inta ay Facebook ku gadatay. Citigroup ayaa hada ku hor ku qiimeysay safxada $19 billion. Facebook ayaa safxada Instagram gadatay sanadkii 2012.
J. Cole Oo Eminem Ku Tilmaamay Inuu Xaday Hip-Hop.
Fanaanka J. Cole ayaa caayay heesayasha cadaanka ah oo ku tilmaamay iney xadeen dhaqan aysan laheyn kasoo ula jeedo Rap iyo Hip Hop. Heesta uu haatan soo saray oo lagu magacabo Fire Squad ayaa fanaanka la beegsaday rapper-da cadaanka ah sida Eminem, Justin Timberlake, iyo Mecklemore asagoo ku tilmaamay iney xadeen musigii madowga siduu horey uga xaday heesaha nooca Rock 'n Roll [expander_maker more="Read more" less="Read less"]haleyeygii Elvis Persley, halka ay madowga ku jeeda waxan micno laheyn iyo dagaal dhexdooda ah. Miraha J. Cole ayaa ka mid ah: Same thing that my nigga Elvis did with Rock n Roll Justin Timberlake, Eminem, and then Macklemore While silly niggas argue over who gon' snatch the crown Look around, my nigga, white people have snatched the sound Eminem ayaa heestisa caanka ah ee 'Without Me' horay ugu qirtay inuu lacag ka sameeyay waxey madowga dhaqan u leeyihin oo aan cadaanka lagu aqoon tasoo uu ula jeeda heesihisa rap-ka.[/expander_maker]
Samuel L. Jackson Oo Ugu Yeeraya Fanaaniinta Reer Hollywood Iney Police-Ka Ku Mudaharadaan.
Xili wadanka Mareykanka mudaharaadyo aad u baaxad weyn oo looga soo horjeeda booliska Mareykanka iyo sidey dhaqmayan, ayaa soo baxay muuqaal dhan 47 ilbiriqsi uu iska duubay jilaaga caanka ah ee Samuel L. Jackson. Fanaanka ayaa ku taxadinaya jilaayasha reer Hollywood iney heesaan 'I can't Breath' hees ugu magacdaray. Heestan ayaa magaceeda ka wadata wiilki ay dileen booliska ee Eric Garner kalmadihii ugu dambeeyay uu ku dhawaaqay mar ay ceejiyeen niman booliska ka mid ah. Jackson ayaa ku waaninaya reer Hollywood iney arintan ka hadlaan.
Robin Van Persie Oo Manchester United Guul Muhiim Ah Ku Hogaamiyay , Xili Ay Southampton Gurigeeda Ku Soo Garaacday Iyo Man United Oo Soo Gashay Kaalinta 3 Aad.
Kooxda Man United ayaa guul muhuum ah Southampton gurigeeda kaga soo gaadhay, waxayna guushan ku gaadhay 2:1, waxayna guushan uga mahad celinaysaa gool dhaliyaheeda Robin Van Persie kaas oo labada goolba isagu u dhaliyay. Kooxda Southampton oo xili ciyaareedkan indhaha soo jiidatay ayaa gurigeeda ku soo dhawaynaysay kooxda Van Gaal ee Man United oo iyaduna ka soo kabsatay qaab [expander_maker more="Read more" less="Read less"]ciyaareedkii liitay ee ay ku bilaabatay horyaalka. Southampton ayaa 12 kulan oo ay ciyaartay tartamada oo dhan guulaysatay 11 kulan laakiin waxay guuldarooyin ishuwan kala kulmeen kooxaha Man City iyo Arsenal, waxayna kulanka United dadaalkeeda oo dhan iskugu gaysay inay natiijo fiican ka hesho Man United. Man United oo uu u soo laabtay kabtan keeda Wayne Rooney ayaana ciyaarta hogaanka u qabatay daqiiqadii 12 aad kadib markii uu qalad aad u wayn sameeyay difaaca Southampton ee Fonte kaas oo dib kubbada ugu furtay goolhayeFraser Forster laakiin waxaa fursadaa dahabiga ah ka faa’iidaystay Robin van Persie wuxuuna halkaa ugu dhaliyay United goolkeeda furitaanka, wuxuuna ciyaarta ka dhigay 1:0 ay Man United hogaanka kula wareegtay. Daqiiqadii 18 aad ayaa ciyaarta dhaawac looga saaray Chris Smalling oo uu dhaawac ka soo gaadhay kubbad ay isla boodeen Dusan Tadic laakiin Tadic ayaan sabab u ahayn dhaawaca Smalling laakiin markii ay isla boodeen ayuu dhaawucu soo gaadhay. Dalaal badan iyo weerar deg deg ah oo aan kala joogsi lahayn ayay Southampton daqiiqadii 31 aad la timid goolkeeda barbaraha, waxaana udhaliyay weerar yahankeeda xili ciyaareedkan shidan ee Pelle, wuxuuna ciyaarta ka dhigay barabro 1:1 ah.Waxayna Saints goolkan ka faa iidaysatay kubbad uu khada dhexe Fallaini si qaladan u dhiibay, waxayna ugu danbayn Southampton la timid goolka ciyaarta sii shiday. Inkasta oo ay Man United goolka kula timid fursad dahabi ah oo uu qaladkeeda lahaa difaaca Saints, ayay haddana Southampton qaybtii hore ee ciyaarta samaysay fursado badan halka ay United aad moodaysay inay kubbaduba ku yarayd.qaybtii hore ee ciyaarta ayaana ku soo dhamaatay barabaro min hal gool ah. Markii layskugu soo laabtay qaybtii ayay ciyaartu noqotay mid ka sii adag qaybtii hore ee ciyaarta, Southampton ayaanad daqiiqdii 52 aad ku sigatay inay gool ku hormarto kadib markii uu Long kubbad uu madax ku darbeeyay uu De Gea ka badbaadiyay.Kadib markii ay Southampton fursado badan iska qasaarisay ayuu markale Rovin Van Persie goolka labaad ka dhaliyay , wuxuuna ciyaarta ka dhigay 2:1 ay markale Man United hogaanka ciyaarta ugu qabatay. Laaga xorta ah oo uu soo tuuray kabtan wayne Rooney ayuu Van Persie goolka labaad ku dhaliyay . Van Persie oo xili ciyaareedkan ay dhibaato haysatay ayaa u muuqtay inuu soo ceshanayo qaab ciyaareedkiisii fiicnaa ee uu caanka ku ahaa, ugu danbayn ciyaarta ayaana ku soo dhamaatay 2:1 ay Man United guul qaali ah kaga soo gaadhay kooxda Southampton oo ay marti u ahayd. Man United ayaana gaadhay guusheedii shanaad oo xidhiidh ah, waxaana hadda soo laabatay Man United oo kalsooni badani u soo kordhayso.[/expander_maker]
Kim Kardashian Oo Rabta Iney Dhasho Canug Eysan Caloosheeda Ku Qaadin.
Xiddigta caanka ah ee reer Mareykan Kim Kardashian ayaa daaha a qaaday iney dooneyso canug labaad kadib North West, laakiin war laga soo xigtay saaxibadeed ayaa tilmaamaya inaan Kim dooneyn in caloosheeda ey ku qaado canug kale xiliyadaan, madaama ey dhib kala kulantay soo celinta quruxda jirkeeda marki ey dhashay North. Wararku waxey intaas ku derayaan in Kim Kardashian dooneyso xili dhow canug labaad, laakiin taas micnaheedu maaha iney caloosheeda ku qaadeyso, ha yeeshee waxey rataa iney kireyso haweeneyn kale. Kim ayaa dhib ka martay uurkeedi ugu horeeyay miisaanka jirkeeda oo aad u siyaaday dartii, sidaas darteed kuma deg degi doonto iney mar kale caloosha ku qaado canug kale.
Mohanad Oo Ka Fadhiisanaya Filimada Turkiga.
Jilaaga caanka ah ee reer Turkey Kivanc Tatlitug, ayaa ka fadhiisanaya filimkada, marka uu soo gaba gabeeyo musalsalkiisa hadda socda, isgoo u wareegi doona dalka Mareykanka. Warar ku dhow dhow Kivanc Tatlitug ayaa sheegaya in jilaagu go'aansaday inuu u guuro dalka Mareykanka, isagoo rajo ka qabaa inuu ku biiro shirkadda filimada Hollywood. Wargeysyada Turkey-ga ayaa tilmaamay in Mohanad u imaa doono dalka Turkiga kaliya xayisiin, dib dambana uusan u samey doonin filim Turkish ah.
Rick Ross Oo 50 Kilo Iska Dhimay.
Rapperka garka la bixida caanka ku ah ee Rick Ross oo isla markana burnaanta lagu yaqaanay ayaa sheegay inuu iska dhimay culeys gaaray 50 kilo. Rick ayaa sheegay inuu isku caateeyay cunitaanka cambaruuda, balse video haatan soo baxay ayaan ku jiray sheegayashadas.
10 Haween Oo Majaajileystaha Weyn Bill Cosby Ku Eedeynaya Inuu Faraxumeyn Iyo Kufsi U Geystay.
Haween kor u dhaafaya 10 ayaa kuli ku eedeynaya in majaajileystaha weyn ee reer Mareykan Bill Cosby uu faraxumeyay qeybtoodna kufsaday. Arintan oo shaac baxday dhamaadki bishi lasoo dhaafay ayaa ilaa haatan la ogeyn sababta ay intaas dhan u qarinayeen. Haweenkan ayaa kuligood ka shaqeyn jiray musalsalki qosolqosolka ah uu hogaamin jiray majaajileystahan ee The Cosby Show. [expander_maker more="Read more" less="Read less"]Waa kuwana 10ka haween oo soo eedayay Cosby: Andrea Constand - Haweeneydan ayaa sheeganeysa in Cosby faraxumeyay sanadkii 2006 asagoo maandooriye siiyay. Barbara Bowman - Bowman ayaa sheegtay in Cosby uu maandooriye siiyay kadibna kufsaday sanadkii 1985 markaas ay jirtay 17-sano. Joan Tarshis - Duqdan ayaa ayana ku eedeyneysa in Cosby uu kufsaday sanadkii 1969 markasoo ay jirtay 19-sano, marey u aheyd qoraa. anice Dickinson - Jilaadan ayaa ayana sheegtay in Cosby uu ka codsaday iney u raacdo wabi lagu magacaabo Lake Tahoe si ay uga wada hadlaan film uu rabay iney jilaa ka noqoto sanadkii 1982, balse waxey ku dhamaatay inuu maandooriye siiyo kuna kufsado sila wabigaas agtisa. Tamara Green - Green, oo markii ugu horeysay hadalkan shaacisay sanadkii 2005 ayaa sheegtay in 70taneydaii Cosby iska dhigeey inuu daawa siinaayo marey hargab qabtay halkaso uu maandooriye siiyay isla markasna kufsaday. Louisa Moritz - Louisa ayaa sidoo kale aydeyn kuwaa kor kusoo xusnay lamida soo jeedineysa ayadoo sheegtay in Cosby uu ku qasbay iney u sameyso galmada afka marey gadasha masrax ay ku jilaayeen joogeen, tasoo uu ka balanqaaday inuu kor u qaadi dooni shaqadeeda. Haweenkan ayaa sidoo kale waxa ka mid ah Linda Joy Traitz, Beth Ferrier, Carla Ferrigno iyo Andrea Leslie oo uu 1992 Leslie ku kufsaday hudheel ay ku sugnayeen kadib markuu siiyay cabiitaan aad u culus oo maanka dooriyay. Qareenka Bill Cosby ayaa sheegay in haweenka soo fara badanaya ay aad xad dhaaf u tahay oo caqli gal aheyn. Lupita Nyong’o Oo Gacaliyaheeda K'naan Usoo Kaxeesatay Glamour's Women Of The Year. Actorda reer Kenya Lupita Nyong'o ayaa usoo kaxeesatay fanaanka K'naan xaflada jariirada Glamour ee ku qeybineysay biladaha Women of The Year. Lupita ayaa jariiradaaasi u dooratay haweeneyda sanadkan. Jaraa'ida caalamka ayaa K'naan ku tilmaamay inuu yahay mid aad camerada uga xishooda. Lamaahan oo labadoodaba Geeska Africa kasoo jeeda ayaa kamarada ka dhuunta oo haatan ay tahay markii labad oo meel caam ah lagu arko ayagoo isla socda. K'naan oo Lagu Arkay New York Asagoo Casho U Daadihinaya Lupita Nyong'o. Jennifer Lopez Oo Ku Ceebowday Masraxa. Fanaanada caanka ah ee reer Mareykan Jennifer Lopez, ayaa ku ceebowday Masraxa xili ey soo jeedineysay xafladda Hollywood Film Awards, oo lagu qabtay Los Angeles, waxaana soo xaadiray goobta dad badan oo caan ah. Jennifer Lopez ayaa qaladay magaca filimka uu jilay Gerard Butler, eyadoo is celi weyday kadibna qosol la dhacay, magaca filimka oo ahaa 'How to Train Your Dragon 2, ayaa Lopez ugu dhawaaqday "How to "Drain" Your Dragon ". Intaas kadib Gerard Butler ayaa kula kaftamay Jennifer Lopez, waan ku faraxsanahay inaan qaato abaalmarinta filin aanan ka qeyb gelin, isagoo ka gaabsaday qaladka Lopez gashay. Katie Holmes In Badan Ayaan Ku Dhax Ooyay Suuliga. Atariishada caanka ah ee Katie Holmes ayaa u sheegtay jariirada People iney soo martay wax yaabo badan oo saameeyn ku reebay nolosheeda kadib marki ey kala tageen saaxibkeed Tom Cruise. Katie Holmes oo 35-jira ayaa yiri "marki aniga iyo gabadheyda aan usoo wareegnay New York waxaan taageero ka helay deriska oo si wanaagsan i noo caawiyya, laakiin waxaan soo maray xilli aan suuliga ku dhax baroorto. "Wax badan ayaan soo maray laakiin weli waa rumeysanahay jaceylka sidaas waxaa tiri Katie Holmes, oo muujisay iney xasuusato Tom. Sababtii Robin Williams U Geeriyooday Oo La Ogaaday. Baaritaan la weday tan iyo marki uu geeriyoody xiddiga Hollywoodka ee Robin Williams ilaa hadda, ayaa ugu dambeyn lagu ogaaday sababta jilaagu u geeriyooday. War rasmi ah oo laga soo saaray geerida Robin Williams, ayaa lagu sheegay inuu is dilay, waxaana warkaan ka dhawaajiyay kabtanka sare ee xafiiska Police-ka Mareykanka. Robin Williams oo 63jir ahaa, ayaa meydkiisa laga helay 11ki August guri uu deganaa, waxaana la faafiyay warar kala duwan oo sheegaya sababta uu u geeriyooday. Oprah Winfrey: Hadii Aan Caruur Dhali Lahaa Wey I Dhecbaa La Haayeen. Waxa ey daaha ka qaaday haweeneyda caanka ah ee Oprah Winfrey arimo badan oo ku saabsan nolosheeda, eyadoo ka hadashay sababta ey caruur u dhali weysay. Oprah Winfrey oo wareeysi siisay jariirada People ayaa sheegtay ineysan wax qoomamo ah ka joogin ineysan caruur dhalin eyadoo 60-sano dhaaftay hadda. Oprah oo kamida haweenka ugu caansan caalamka ayaa tiri "wax ciila kama qabo in aanan caruur dhalin, maxaa yeelay hadii aan caruur dhali lahaa wey i dhibsan lahaayeen, marka ey ogadaan nolosha cariiriga ah ee aan soo maray ayaraanteydi. Waxaa xusid mudan in Oprah Winfrey gabar dhashay eyadoo 14-sano jir ah, taas oo geeriyootay saacado kadib marki ey dhalatay, uurka Oprah ayaa ka dambeeyay kadib marki la kufsaday. Hooyada Dhashay Walaalaha Kardashian Oo Baaq U Dirtay Selena Gomez. Kris Jenner oo ah hooyada dhashay walaalaha Kardashian ayaa baaqday u dirtay fanaanada caanka ah ee Selena Gomez, eyadoo ku tiri "wanaaji muuqaalka jirkaada oo samee jimcisi. Kris Jenner oo maamule ka ah shaqada Selena ayaa sheegtay in lama huraan ey tahay in Selena Gomez wax ka bedesho muuqaalka jirkeeda, iskana jarto xulusta sida gabadheeda Kim Kardashian oo kale. Waxey sheegtay hoyada dhashay Kim in Selena la midtahay ilmaheeda, sidaas darteed ey kula talineyso in wax badan ey ka bedesho muuqeeda. Brad Pitt: Hadiyad Qaaliya Ayaan U Diri Doonaa George Clooney. Jilaaga muuqaalka qurxoon ee Hollywoodka Brad Pitt ayaa sheegay inuusan tegin xafladdi aroos ee George Clooney iyo Amal Alamddin, taas oo ka dhacday dalka Talyaaniga, waxaana Brad tilmaamay inuu ku mashquul sanaaa sawrika filimkiisa cusub ee By The Sea. Dhanka kale waxa uu sheegay Brad in xiriir wanaagsan kala dhexeeyo George Clooney, wax dhibaataa ama mashkilana eysan ka dhax jirin sida warbaahinta qaar ey faafiyeen. Jilaagu waxaa kale uu sheegay in hadiyad qaaliya uu u diri doono George Clooney iyo xaaskiisa Amal xili dhow. Atariishad Mareykan U Dhalatay Oo Meydkeeda Laga Helay Webiga Jiinkiisa. Waxaa la helay meydka atariishad Mareykanka u dhalatay, taas oo muddo isbuuca la la'aa, waxaana marki dambe laga helay Webiga jiinkiisa. atariishadaan ayaa lagu magacaabaa Misty Upham Qoyska Misty Upham ka dhalatay ayaa muddo isbuuc ka hor ah, waxey Police-ka ku war geliyeen iney maqantahay gabadhooda meel ey jirtana eysan war u hayn. Marki la helay meydka Misty Upham oo 32-sano jira, ayaa dhaqrar baaritaan ku sameeyay waxa uu sheegay inaan weli la fahmi karin sababta Misty Upham u dhimatay, waxaana weli ku socda baaritaan. Mariah Carey Oo Xaflad Guuleysatay Ka Tuntay Dalka Shiinaha. Fanaanada caanka ah ee reer Mareykan Mariah Carey ayaa xaflad cajiiba ka tuntay dalka Shiinaha, eyadoo dadki soo xaadiray xafladdaan si wanaagsan u qancisay. Xafladda Mariah Carey ayaa u dhacday sidii la filaayay si aan aheyn, maadaama fanaanadu horay ula kulantay dhaleeceen fara badan. Mariah Carey ayaa Shiinaha ka hor waxey kasoo tuntay dalka Japan laakiin xafladaas si wanaagsan uma tumin maxaa yeelay waxey ku jirtay xaalad nafsi ah, maadaama ey kala tageen Nick Cannon. Qaabka Akon Uga Heesay Congo Isagoo Ka Cabsanaya Ebola. Fanaanka caanka ah ee reer Mareykan Akon, ayaa dhaleeceyn la kulmay kadib marki uu bandhig faneed ku qabtay dalka Congo, laakiin fanaanka ayaa qaab qosol badan uga heesay bandhigaan, isagoo cabdsi weyn ka qabay cuqurka Ebola. Akon wuxuu soo dhaxgalay bacweyn oo wada daboolan, isagoo inti uu bandhigga ka heesayay kor hee haabayay kumaan taageero u ah. Fanaanka ayaa sheegay in cudurka Ebola yahay mid qatar ah sidaas darteed ey haboontahay inuu ka gaashaanto. George Clooney: Waxaan Rabaa Inaa Noqdo Waalid. Jilaaga rug cadaaga ah ee Hollywoodka George Clooney ayaa ku dhawaaqay inuu diyaar u yahay inuu noqdo Aabo, kadib marki uu helay Amal Alamuddin oo dhawaan ey is guursadeen. George Clooney ayaa u sheegay saaxibadiisa ugu dhow-dhow inuu markaan diyaar u yahay inuu caruur dhalo, waana marki ugu horeysay oo war nuucaana laga maqlo jilaaga, eyadoo horay loogu yeeri jiray canugi weynaa. Waxaa xusid mudan in George Clooney oo 53-sano jira uu guursaday Amal Alamuddin oo 36-sano jira, waxaana guurkoodu ka dhacay dalka Talyaaniga, eyagoona weli ku jira bisha malabka. Mila Kunis Iyo Ashton Kutcher Oo Daaha Ka Qaaday Magaca Loo Bixiyay Gabadhooda Yar. Xiddigaha Ashton Kutcher iyo Mila Kunis ayaa soo dhoweeyay dhalashada gabadhooda yar, eyagoo sidoo kale daaha ka qaaday magaca loo bixiyay, dhanka kale waxey fafiyeen sawirka muluqdaan yar. Magaca loo bixiyay muluqdaan ayaa lagu sheegay Wyatt Isabelle, eyadoo Ashton Kutcher Websetie-ka BuzzFeed-esque ku faafiyay dhowr sawir oo ey leedahay Wyatt., waxaa kamida wargeysyada faafiyay warkaan Hollywood Life. Mila Kunis ayaa gabadhaan dhashay xili dambe 30-ki Septembar, eyadoo la ogyahay in labadaan lamaane ku dhawaaqeen fargashigooda sanadkaan 2014 dhaxdiida, laakiin su'aasha leys weydiinaayo ayaa ah shimee ayuu noqo doonaa guurkoodu? Dood Kulul Oo Dhaxmartay Kim Kardashian Iyo Ninkeeda Kanye. Lamaanayaasha reer Mareykanka ee Kim Kardashian iyo Kanye West ayaa dood kululi dhaxmartay, kadib marki dhowr wargeys lagu faafiyay sawirka Kim oo qaawan. Wararka ayaa sheegaya in Kanye si aada uga carooday arintaan isagoona dareemay maseer,, waxuu sheegay inuusan awoodin inuu arko sawirka Kim oo qaawan. Sidoo kale wuxuu tilmaamay Kanye West, in Kim weli xiriir la leedahay nimankeedi hore, waxey isku dayday Kim iney dejiso ninkeeda laakiin uma suuro gelin. Justin Bieber Iyo Selena Gomez Oo Dalxiis Farda Fuula Iskala Soo Muuqday. Fanaanka da'da yar ee u dhashay dalka Canada Justin Bieber oo 21-sano jira, ayaa boggiisa Instagram ku faafiysay sawir ey kuwada jiraan isaga iyo saaxibtii Selena Gomez oo fardo wada saaran. Intasoo xiriirkoodu ahaa mid iska alow sahala xiliyadii ugu dambeysay, hadana Justin iyo Selena mar kale ayey isla soo muuqdeen, waxaana sawirka laga arkayaa Justin oo xiray foojiyada qoysaarada Lo'da. Labadooda kaliya meysan aheyn ee waxaa ku wehliyay tamashleynta asxaab kale oo fara badan, waxaana muuqata in mar kale ey isku soo laabteen Selena iyo Gomez eyadoo laa ogaa iney is dagaaleen bilowgi xagaagan. Ma Rumeysaneysid Arinta Justin Bieber Ka Sameeyay Dalka Turkiga. Fanaanka caanka ah ee reer Canada Justin Bieber ayaa arin layaab leh ka sameeyay dalka Turkiga xili xaflad faneed uu ku qabtay Jaamacada Istanbul, isagoo labo jeer joojiyay xafladiisa. Sababta Justin Bieber uu u joojiyay heesta waxaa lagu sheega inuu maqnay codka Aadaanka Salaadda, isagoo ku saamoobay, waxaa xafladaan kasoo qeyb galay dad ka badan 300-kun oo ruux. Dad fara badan ayaa faalo ka bixiyay arintaan, eyadoo qof kamida dadkaan uu soo qoray fanaaniinta carabta xitaa ma joojiyaan heesaha marka ey maqlaan adinka, waxaana dad badan ey u jeediyeen Justin Bieber inuu sidaa kusii socdo.[/expander_maker]
9-Sano Iyo Lix Caruura Kadib Brad Pitt Iyo Angelina Jolie Oo France Isku Guursaday.
Ku dhawaad 10-sano oo labadaan lamaane ey wada noolaayeen ugu dambeyn waa is guursadeen, waxaana arooskoodu ka dhacay dalka France, eyagoo guri weyn ku leh halkaas. Jariirada PEOPLE Magazine ayaa faafisay khabarka guurka Brad iyo Angelina, waxaana nigaaxoodu ka dhacay kaniisad yar oo ku taal koofurta dalka France. Sida lagu xusay majalada PEOPLE Magazine, waxaa kasoo qey gelaya guurka Brad Pitt oo 50-sano jira iyo Angelina oo 37-sano jira, dad badan oo caan ka ah caalamka, kuwaas oo isugu jira jilayaal iyo marti sharaf kale.
Jackie Chan Oo Ceeb Xun Soo Gaartay Kadib Marki.
Jilaaga caanka ah ee Jackie Chan ayaa ceeb iyo murugo lasoo deristay, kadib marki wiilkiisa Jaycee Chan lagu qabtay magaalo madaxda dalka Chinaha Hong Kong, eyadoo lagu eedeeyay inuu siday daroogo fara badan. Bogga uu ku leeyahay Jackie Chan Internetka ayuu ku sheegay inaan wax ka quseeya jirin arintan wiilkiisa, wixi masuulid ahna isagu qaadayo, isagoo yiri "sidaas ey tahay garabkiisa ayaan istaagi doonaa. "Waxaan dareemayaa niyad jab, caro, iyo sidoo kale ceeb ayuu yiri, sida aabo kasta qalbiga u jabo ayaa qalbigeygu u jabay, aniga iyo Jaycee waxaan raali gelin siineynaa bulshada si guud, sidaas waxaa yiri Mr Chan. Jackie Chan ayaa rajeeyay in dadku wax badan ka bara doonaan wiilkiisa, kana fogaa doonaan daroogada iyo waxyaabaha xun.
Rihanna Iyo Chris Brown Oo Waji Ka Weji Isku Arkay.
Indhaha kaamirada ayaa qabtay fanaanada caanka ee Rihanna oo daawaneysa saaaxibkeed hore Chris Brown oo ka qeyb gelayay ciyaar kubada kolayga ah. Chris Brown oo ka qeyb galay ciyaar lacago loogu aruurinayay dadka tabaleysan, ayaa waxaa kaamiradu qabatay Rihanna oo dhax fadhida daawada yaasha ciyaarta, una sacab tumeysa isaga.
Jilaaga Reer Mareykan Robin Williams Oo Is Dilay.
Aktarka caanka ah ee Hollywoodka Robin Williams oo kamida xiddigaha ugu magaca dheer caalamka sidoo kalana heysta abaalmarinya Oscar ayaa maalintii shalay meydiisa laga helay gurigiisa, eyadoo Boolisku xaqeejiyay in Robin Williams uu is dilay, waxaa da'diisu eheed 63-sano. Booliska oo baarintaan ku sameeyay meydka Robin Williams, ayaa sheegay in jilaagu is merjiyay, eyagoo sidoo kale tilmaamay in baaritaanku weli socdo. Filimadii uu kusoo caan baxay Robin Williams waxaa kamid ahaa "Good Morning, Vietnam" oo 1987ki uu jilay, sidoo kale wuxuu kaid ahaa xiddigaha loogu jecelyahay in la daawado filimadooda.
Lady Gaga Oo Soo Caafimaaday Isbitaalkana Laga Soo Saaray.
Fanaanada iska yaabiska badan ee reer Mareykan Lady Gaga, ayaa isbitaalka la dhigay, kadib marki heer kulkeedu kor u kacay xili ey joogtay magaalda Denver ee gobalka Colorado. Magaaladaan ayaa ka sareeysa dhulka masaafo dhan 1.6km, eyadoo fanaanadu xaflad ka tunmat magaaladaan kadibna la dhigay isbitaalka. Bogga ey ku leedahay Instagram ayey ku faafisay Gaga sawirka eyadoo xiran qanaacada lagu neefsado, waxeyna sheegtay in xaaladeedu degantahay.
Fanaanka Steven Seagal Oo Soo Xirtay Shaati Sawirka Putin Lagu Dhejiyay.
Fanaanka caanka ah ee reer Marekan "Steven Seagal " ayaa kasoo muuqday xaflad lagu qabtay dalka Ruushka, isagoo sheegay inuu jecelyahay shacabka Ruushka. Shaarka uu xirnaa Steven Seagal ayaa waxaa ku dheganaa sawirka Ra'iisul wasaaraha dalkaas Vladimir Putin, isagoo u mahad celiyay Steven dad weynihii sacabka u tumay kuna yiri waan jecelahay shacabka Ruushka. Arinta fanaankaan ayaa warbaahinta Mareykanku waxey ka qoreen warar kala duwan, eyadoo qaar kamida ey dhaleeceeyeen hab dhaqanka Steven Seagal, maadaama Ruushka iyo Mareykanka dagaal siyaasadeed ka dhexeeyo.
Raga Suadi Arabia Oo Laga Mamnuucay Iney Guursadaan Haweenka Pakistan, Bangladesh, Chad Iyo Burma.
Sharci cusub oo lagu soo rogay Raga u dhashay Dalka Saudi Arabia ayaa qeexaya ineysan haweeen kasoo guursan karin wadamada kala aha Pakistan, Bangladesh, Chad iyo Burma. Sheekadan ayaan wali la ogeyn sababta Boqortooyada Saudi Arabia u mamnuucday. Sidoo kale sharcigan ayaa sharci adag kusoo rogay guursiga Haweenka Morocco, sharcigas adag ayaa wax ka mid ah in uusan farqiga [expander_maker more="Read more" less="Read less"]da'da labada qof oo is guursanaya uusan ka badneyn 25. Isla markana uu ninku kasoo idin qaato xaaskisa kowaad haduu mid qabo, waraaq caafimaad oo cadeyneysa in xaaskisa caafimaad daro heeso ama ay ilmo deysay. Boqortooyada ayaan wali xaqiijin sababta ay sharcigan usoo rogtay. Diinta Islam ayaan qabin sharci xanibaya in qofka muslimka ah guursado qof diin kale leh iskaba dhaaf gabdho muslim ah.[/expander_maker]
Kaamirada Oo Qabatay Justin Bieber Oo Xabad Madow Ah Doon Kula Dhax Jira.
Indhaha Kaamirada ayaa soo qabtay fanaanka da'da yar ee reer Canada Justin Bieber oo xabad madow oo shidan Doon kula dhax jira dalka Spain. Justin Bieber iyo qoftaan ayaa shumis iyo xabad is gelis is dhaafsaday, eyadoon ilaa hada la ogeyn cidda ey tahay iyo halka ey kasoo gashay noloshada fanaankan. Warar hoose ayaa sheegaya in Justin qoftaan ka qabtay wadada, eyadoo subaxdi hore soo martay meel agtiisa kadibna indhihiisu raaceen.
Karrueche Tran Oo Birta Ugu Dhufatay Chris Brown.
Wiilka mardhow kasoo baxay xabsiga Chris Brown ayaa warar sugan soo sheegayan in saaxiibtis Karrauche Tran ay birta ugu dhufatay. Karrueche ayaa ka maseertay kadib markuu Chris LIKE dhahay sawiro asaga iyo Rihanna ku sawiranyihin kuwaaso so galiyeen Instagram taageerayashisa. Tan ayaa ciyaalnimo u muuqata laakinse Karrueche ayaa lasoo sheegaya iney u jartay Chris badalatayna [expander_maker more="Read more" less="Read less"]nambarka telefoonkeeda gacanta. Warka ayaa kusii daraya in Karrauche aysan ku farxsaneyn xiriirka Chris awalba oo ay raadineysay qaabay uga harto. Waxey ku tilmaamtay inuu sidi ciyaalki u dhaqmo oo waqti badana ku beeldareeyo xaflado iyo daroogo. Dhanka kale Chris ayaa taas dhagta u taagin oo isla markiba xeebta Miami u raacay saaxiibta Karrauche. Chris ayaa ku noqday Karrauche kadib markay si fool xun u kala hareen Rihanna.[/expander_maker]
Shakira Iyo Piquw Oo Si Qurux Badan Kusoo Khatimay Fasoxoodi.
Xiddiga daafaca uga ciyaara kooxda Barcelona Gerard Pique, ayaa maalintii ugu dambeysay fasixiisa kusoo gabagabeeyay beer Lo'da lagu ilaaliyo kahor inta uusan ku biirin tababarka Barce. Pique ayaa faafiyay sawir isaga, wiilkiisa Milan iyo Shakira ey kuwada jiraan, eyadoo Shakira gashantaay koofiyadda lagu yaqaano qowsaarada. Shakira ayaa horay u balan qaaday iney hilmaansii doonto ninkeeda Pique wixii kasoo gaaray koobka aduunka Brazil 2014, oo xulkiisa Spain lagu soo reebay guruubka hore.
Lily Allen Oo Baxar Ku Jirta Kadib Markey Askari Ka Codsatay Inuu Xiro.
Heesada Lily Allen ayaa baxar ku jirta kadib markey askari ka dalbatay inuu matalo xirideeda ayadoo sawirka u rabtay bogeeda Instagram. Sheekadan oo dhacday marey Austarlia joogtay askarigana ahaa mid wadada u baneenayay. Booliska Australia ayaa haatan baaritaan ugu jira arintan, asagoon soo dhaweyn qaabka askariga uu u sameeyay amar shacab. Wali ma cada in booliska la xiriiray Lily laakinse waxa la heysta askariga falkan ka qeyb qaatay. Sidoo kale Lily ayaa ka bixisay sawirkan bogeeda Instagram.
Fanaanka Eddie Vedder Oo Weerar Culus Kala Kulmas Israel, Kadib Marki Uu Dhaleeceeyay.
Fanaana caanka ah ee kooxda Pearl Jam "Eddie Vedder , ayaa weerar kala kulmay warbaahinta Israel, arintaan ayaa ka dambeysay kadib marki fanaanku si dahsoon u dhaleeceeyay Israel xili uu bandhig faneed ka qabanaayay dalka Ingiriiska, isagoo yiri "in canshuurteena lagu laayo caruur aan waxbo galabsan sax maahan, laakiin wax magaca kuma dhawaaqin Eddie. Warbaahinta Israel ayaa [expander_maker more="Read more" less="Read less"]Eddie Vedder ku eedeyay inuu weeraray kuna xad gudbay dalkooda eyagoo muuqaal gaaban ku faafiyay barta Internetka. Al-Fanaan Eddie waxa uu yiri ma dooneyno dagaal, isagoo kadib jamaahiirta ku yiri " waxaan heysanaa nabad iyo qalab horay u maray, waxaan awoodnaa inaan si fudud ula xiriirno saaxibadeyn wax weliba waa heysanaa, laakiin meel aan naga fogey bambooyin ayaa ka dhacaaya, waan dareemi karaa arintaan marka xalka ugu dambeeya uu dagaal noqodo, hadii qof inta yimaado qabsado dhulkaada ma jiro qof aqbalaayo taa, sidaas waxaa yiri Eddie Vedder . Fanaankaan reer Mareykan ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay in canshuur laga uruuriyay muwaadiniinta Mareykanka lagu laayo caruur yaryar, isagoo kadibna kusoo celiyay heestiisa "Dagaal dambe maya"[/expander_maker]
Lil Wayne Oo Christina Milian La Baxaayay Isbuucyadan.
Rapperka Lil Wayne ayaa jaceyl u qaaday actor-da Christina Milian ayagoo isbuucyadii lasoo dhaafay isla baxayay. Milian ayaa ka hartay saaxiibkedi hore Jas Prince bil ka hor, isla markina waxey ku xiratay Lil Wayne. Wali lama hubo iney jaceyl ka tahay, taaso TMZ beenisay in lamaanahan ey raban iney soo jiitan indhaha shacabka. Ayadoo Christina ay ku biirta shirkada Lil Wayne ee Young [expander_maker more="Read more" less="Read less"]Money Entertainment ayadoo rabta iney heeso soo qaado. Waa markii labaad oo lagu arko ayago isla socdo. Lil Wayne oo 31 jir ah ayaa iska leh afar caruur oo waweyn halka Milian, 32 ay leedahay hal gabar. Sheekooyin aan la hubin ayaa sheegaya in gabar weyn uu dhalay Lil Wayn ay is bartay lamaanahan ayadoo saaxiib la ah gabadha ay dhasha Milain. Si kastoo ahaataba waa arki doona sheekadan jaceylka la indhasaabay u muuqata meeshey gaarto.[/expander_maker]
Angelina Jolie Oo Dacwad Ku Qaadeysa Jariiradii Ka Faafisay Iney Daroogo Cabbi Jirtay.
Sida lagu qoray jariiada The Times ee kasoo baxda Ingiriiska, atariishada caanka ah ee reer Mareykan Angelina Jolie ayaa maxkamad la kori doonta jariirada kale ee Daily Mila, oo dhawaan faafisay muuqal yar ooy ku sheegeen inuu yahay Angelina oo cabsan daroogo sagaashameeyadi. Mail ayaa sheegtay in Angelina Jolie daroogada cabbi jirtay, xiligi ey ku nooleed magaalanada New York ee Mareykanka. The Times waxey ka dhawaajisay, in hada ey qoorta isugu jiraan Angelina iyo Daily Mail, eyadoon la ogeyn halka ey ka keeneen muuqaalkaan.
Jennifer Lopez Oo Faafisay Sawir Selife Ah Oo Ey La Gashay Michelle Obama.
Fanaanada ahna atariishada Jennifer Lopez ayaa faafisay sawir Selfie ah oo ey kuwada jiraan marwada koobaad ee dalka Mareykanka michelle Obama, eyadoo ku faafisay sawirkaan mid kamida bogaga ey ku leedahay Internetka. Jennifer Lopez ayaa sawrikaan iska qaaday xili ey ka qeybgeleysay shirka urur ey leeyihiin muwaadiniin Latin America, kaas oo lagu qabtay Holtelka Hilton oo ku yaal magaalada New York.
Justin Bieber Oo Khiyaanay Seelina Gomez, Eyadoo Dartii U Weysay Saaxibadeed.
Gabar cusub ayaa soo gashday sida muuqata nolosha fanaanka da'da yar ee Justin Bieber, taas oon eheyn Seelna Gomez oo iska moogeysiisay dar-daarankii ey usaoo jeediyay saaxibadeed, Justin dartiina ku weysay asxaabteedi. Justin Bieber ayaa faafisay sawir ey moxogga heysato gabadha modelada ah ee Yovanna Ventura, laakiin wax comment ah kama bixin. [expander_maker more="Read more" less="Read less"]Laakiin Yovanna Ventura ayaa dhankeeda soo dhigtay bogga ey ku leedahay barta Internetka sawir jamaaci ah oo ey kuwada jiraan Justin, eyadoo ku hoos qortay ninka ugu wanaagsan caalamka. Qof ogi ma jiro in Yovanna Ventura kusoo biirtay nolosha Justin, waxaana leys weydiinayaa iney kala hareen Seelena iyo Justin oo dhawaan ey isku soo laabteen.[/expander_maker]
Imaaratka Carabta Oo Isbitaalada La Buuxiyay Kadib Markey Dadka Afur Iska Dharjiyeen.
Dhakhaatirta Imaaratka Carabta ayaa sheegay in dadka soo buuxiyeen qololka xaaladaha dagdaga ah kadib markey cunto iska badiyeen. Sida lagu xusuy jariidada The National oo Imaaratka kasoo baxa ayaa sheegay in dad soomana ay aad cunto u cuneen taasoo calooshoda xamili weysay kadibna xanuun ku sababtay. Warka ayaa sidoo kale sheegaya in dadka laba jibaar kordheen imaanayana [expander_maker more="Read more" less="Read less"]ayagoo xanuun aad ah ka haayo caloosha. Tan ayaa sababtay dadkoo cuntada si dhakhso ah u cuna cuntada markey afuraan. Dhakhaatirta ayaa kusoo waramay in dadka qeebtood imaadaan ayagoon neefsan karin. Dhakhaatir ayaa ku talinaya iney dadka cunto yar ku af bilaaban oo tartiib inta kale u cunaan ayagoo badsanaya cuntada caafimaadka iska leh.[/expander_maker]
7 Xidigo Hollywood AH OO Qaraabo La AH Madaxweynayasha Mareykanka Soo Maray.
Xidigahan reer Hollywood ayaa qaraabo la ah madaxweynayaal soo maray Mareykanka. 1. Tom Hanks Actor-ka filmka Captain Phillips ayaa kasoo jeeda madaxweynihi 16aad ee Mareykanka Abraham Lincoln. 2. Hugh Hefner Asaasaha playbook ayaa la sheegay dhawaan inuu kasoo jeedo qoyska Goerge Bush 3. Ben Affleck Affleck ayaa is xigaan Barrack Obama waxey isku jiraan 11 adeer. 4. Madonna Madonna ayaa xiga madaxeynihi tobanaad ee Mareykanka John Tyler. 5. Brad Pitt Inkastoo uusan kasoo qeyb galin xafladaha qoyska, Brad ayey is xigaan madaxweynaha haatan ee Barrack Obama. 6. Richard Gere Richard Gere ayaa laba madaxweyne oo Mareykan xiga Franklin Delano Roosevelt iyo James Garfield. 7. Clint Eastwood Ruugcadaaga ayaa xiga Franklin Pierce.
Eminem Gabadhisa Oo Dugsiga Sare Qadarin Ku Qalin Jabisay.
Gabadha rapperka weyn ee Eminem uu dhalay, Hailie Mathers ayaa ku qalin jabisay dugsiga sare qadarin 'Honor' ayadoo keentay buundada 3.9 sida lagu xusay safxada iskuulaas. Hailie ayaa aadi jirtay dugsiga sare ee Chippewa Valley High School ee ku yaal Township, Michigan. Eminem ayaa wax badan ku xusay Hailie fankiisa, asagoo waliba hees dhan ayada u hibeeyay. Gabadhan oo u dhashay qoftiisi hore ee Kimberly ayaa amaantay aabeheed iyo hooyadeedba ayadoo tiri, waxan u mahad celinaya waalidkey ayagoo si fican igu dhiiri galiyo inaan meeshan soo garo. Hailie ayaa sii baran doonta psychology ama entrepreneurship ayadoo aadi doonta jaamacada Michigan State University.
Fanaanad Nigerian Ah Oo Bikradnimadeeda Dhaafsaneysa Gabdhaha Afduubka Ku Heystan Boko Haram.
Fanaanad reer Nigeria ah ayaa dadki ka fajicisay kadib markey usoo bandhigtay bikradnimadeeda kooxda Boko Haram ayadoo dhaafsaneysa gabdhaha eey afduubka ku heystaan. Adokiye, 23, ayaa qorshahan usoo bandhigtay kooxda mayalka adag ee Boko Haram si ey usii dayaan 276 gabdho reer Nigeria ah oo eey afduubteen bishi April ee sanadkan. Fanaanadan oo aad caan u ah ayaa sheegtay iney wali bikrad tahay eyna dhaafsaneyso gabdhahas sii deyntooda, waa sidey u ugu warantay Vanguard. Mar loo sheegay iney gabdhaha aad da'doo u yartahay ayey tiri, wa wax aad u xun in gabdho 12-15 sano u dhaxeeyo la xoogo, aniga ha i qaateen waan u adkeysan kara 10 ilaa 12 nin habeenkii, wax ma iga quseyan nafteyda ee caruurtas mar lee ha sii daayan. Sheekadan oo dadka badankiis ilaaween ayaa waxa hada fanaanadan soo cusbooneysiisay ayadoo isla markiiba ku fiday bogaga bulshada ku kulanto.
R. Kelly Oo Diidan Gabadhiisa Wiilka Isku Badashay, Sheeko Waalan.
Boqorka R&B R. Kelly ayaa si weyn u diidan inuu aqbalo gabdhisa isku badashay wiilka. Qoyska R. Kelly ayaa ku tilmaamay inuu yahay mid aad u arxan daran oo qalbi wanagsan laheyn. Jaya waa 14 jir gabar ah uu dhalay R. Kelly laakinse haatan camaliyad isku sameysay seey iskaga dhigto wiil hadana la baxday magaca ah Jay. R. Kelly ayaa taas marnaba soo mari la'dahay oo wali ugu yeera Jaya oo gabar ahaan wali u tahay.Jay Kelly ayaa haatan gacaliso iska leh.
Shah Rukh Khan: Shalay Wiilkaan Siday Waa Iga Dheeryahay Maanta!!!
Jilaaga caanka ah ee Bollywoodka Shah Rukh Khan, ayaa la yaab ka muujiyay xaalada aduunyada, isagoo bartiisa Twitterka ku faafiyay sawir ey kuwada jiraan wiilkaasa Aryan Khan oo 17-sano jirsaday. King Khan ayaa yiri " waxaan moodaa iney shalay emeed marki aan ximbaarsanaa, maantana kor ayaan u eegayaan, hadalka Shahruu ayaa kusoo aaday marki wiilkiisu gaaray 17sano. Shah Rukh Khan ayaa ilaahey uga mahad celiyay in caruurtiisu ka raaceen kaliya dhanka muuqaalka, laakiin dhanka dabciga ka wanaagsanyihiin, isagoo yiri caruurteydu waa baariyaal. King Khan sidoo kale wuxuu sheegay in uusan qorsheyn mustaqbalka caruurtiisa isagoo yiri, waxaan ku taageersanahay waxa ey jecelyihiin oo faaiido u ah, wax dhibaataana kasoo gaareyn.
Nin Dambiile Ah Oo Sawirkisa Dumar Badan Caashaqeen.
30 jir lagu magacaabo Jeremy Meeks ayaa lagu xiray Stockton, California ee dalkas Mareykanka, markii la shaaciyay sawirkisa kadib ayaa waxa u waalanaya haween aad u farabadan ayagoo quruxdiisa u bogoy. Wax ka yar 24 saac kadib markii sawirkisa la shaaciyay ayaa lagu shaaciyay internetka sida Facebook, Instagram, iyo Twitter halkaasoo haween badan jaceyl ula dhaceen sawirkisa. Ninkan ayaa lagu qabtay hub uu baabuurkisa ku watay iyo mukhaadarad, sidoo kale waxa uu ka mid yahay ururka burcadka ah ee Crips iyo dambiyo aad u fara badan. Haatan ayuu xabsi ku jira asago $1 million madax furashadiisa tahay. Waxa lasoo taagi doona maxkamada bishan dabayaaqadeeda.
Michelle Obama Oo Ka Carootay Dabaalnimada Ninkeedu Sameeyay.
Go'aankii siyaasiga ahaa ee uu qaatay madaxweynaha dalka Mareykanka "Barack Obama" ee ku saabsana kala badalashada maxaabiis Xarakada Talibaan, ayaa caro afku juuqda gabay waxaa ka qaaday marwada koobaad ee daka Mareykanka Michelle Obama oo dooneysay iney gasho golaha odayaasha, laakiin waxey aaminsantahay in go'aanka ninkeedu wax weyn u dhimi karo. Marawada koobaad kuma qancin qaabka uu sameeyay Mr Obama, eyadoo dhaleeceysay go'aankiisa ku saabsan in maxaabiis Taalibaana lagu bedelo Askari Mareykana oo la heysto. Michelle Obama ayaa aaminsan in arintaan saameyn weyn ku yeela doonto mustaqbalkeeda shaqo, Michelle waxey dooneysay iney doorasho ka gasho maagalada ey kasoo jeedo ee State of Illinois, laakiin waxaa soo waajahay niyad jab, eyadoo tiri waxaan la yaabanahy sidaan u guursaday dabaalkaas. Warka ayaa sheegaya in hamigii Michelle uu burburiyay Obama, waxaana laga yaabaa iney ka tagto ka hor intaan xiligiisa siyaasadeed uusan dhamaan.
Arjen Robben Oo Noqday Cayaaryahanka Ugu Dheeraya Oo Abid World Cup Soo Safta.
Arjen Robben goolkuu ka dhaliyay Spain ayaa ka dhigay cayaaryahanka ugu dheereya oo abid soo safta koobka aduunka. Robben oo ka aargoosanaayay Spain teey ku dhigtey 2010-ki ayaa gool uu ka dhaliyay wuxu xawaaraha orodkisu aha 37km saacadii. Asagoo jabiyay iskoorki uu Ramos horay u dhigay kasoo ahaa 30km/saacadii. Arjen roben ayaa sheegay inuu san weli ka aarsan spain uuna jeclaan lahaa inay isku arkaan mar kale finalka koobka aduunka.
Victoria Beckham Oo Labis Indho Daraandara Dadka Kaga Yaabsatay.
Moodeelada caanka ee Victoria Beckham, ayaa kasoo baxday Hotel ey ka degantahay magaalada New York, eyadoo ku labisan Cambuur dhiin ah oo dhinac looga dhajiyay silis dahab ka sameysan, waxeyna indho daraandar ku riday dadkii wadada marayay. Labis aad u qurux badan ayey soo xiratay Miss Victoria Beckham, kobaha iyo cambuurka ey sidatay intuba isku nuuc ayey ahaayeen. Tan iyo marki ey bilowday howshaan Victoria, maalinba tan ka dambeysa kor ayey usii socotay, waxeyna kamid tahay haweenka ugu magaca dheer caalamka xiligaan, Victoria ayaa ku caan baxday modelka iyo xayisiiska, sidoo kale waxaa qaba David Beckhan oo ah laacib magac dheer ku leh garoomada kubadda cagta.
Jarmalka Oo Dadka Fadhiga Salootada Garoomada U Qaateen See U Daawadan World Cup.
Magaalo madaxda Jarmalka ee Berlin ayaa dadka taageera kubada cagta waxey guryahooda kasoo qaateen fadhiga salootada seey ugu daawadan Koobka Aduunka ee ka socda Brazil. Kadib markii garoon kooxaha magaaladas leeyihin lasoo dhigay dhalo weyn markasna dadka lagu dhiiri galiyay iney la imaadan fadhiga salootadooda. Dad badan ayaa is qoray laakinse waxa la aqbalay 720 oo kaliya kadib markey meesha buuxsantay. 12,000 qof ayaa soo xaadiray halka 3,000 ka mid eey fadhiga salootadoda ku raaxeesanayeen kuwaasoo si wanaagsan loo dhigay bartamaha garoonka.
Feeryahanka Floyd Mayweather Iyo Rapper T.I Oo Gacan Iskula Tagay,
Muuqaalo laga soo duubay dagaal aan waxba leyskula harin ayaa tusinaya Floyd Mayweather iyo rapperka T.I oo gacan isku qaadaya. Dagaalkan ayaa wali la garaneyn waxa sababay laakinse waxa leysla dhacay kuraas. Sheekadan ayaa ka dhacday maqaayad la dhaho Fatburger oo T.I iyo Mayweather ku sugnaayen. Waxa kala qabtay ilaaliyaashoda khaaska ah inteysan si xun wax isku gaarsin. Muuqaalka ayaa laga maqla Mayweather oo dhahay 'Control you B****' micnaheedu yahay Dh***** edeb u yeel, taasoo loo malenayo inuu ka wado xaaska T.I ee Tiny.
Wiz Khalifa Oo Xabsiga Ku Dhex Sheekenaya
Wiz Khalifa ayaa xabsiga haatan ka dhex sheekenaya kadib markii lagu qabtay marijuana asaga dagada dayuuradaha ka duulaya. Booliska ayaa sheegay ina lagu qabtay 0.5 gram oo xashiish ah, sida muuqata Wiz Khalifa ayaan dhib u arkin sheekadan wuxuna soo galiyay sawir bogisa Twitter asago xabsiga fadhiya.
Arday Iskuulka Sare Ee California Dhigta Oo Keenay Ciyaarti Michael Jackson,
Arday cadaan ah oo dhigta iskuul yar oo ku yaala California ayaa keenay qaabkii uu Michael Jackson u ciyaari jiray. 17 jirkan ayaa lagu magacabo Brett Nichols kuna soo bandhigay khibradihisa daqiiqado yar oo la siiyay. Wiilkan ciyaartisa ayaa warbahinta aad ugu faaftay sacaado kadib markii Youtube lasoo saaray muuqaal laga soo duubay. Brett ayaa ku guuleystay tartankii xirfadaha oo 60 arday ka qeyb galeen. Warar soo baxaya ayaa sheegaya in Brett eey lasoo xiriireen dadka haya hantidii uu ka dhintay Michael Jackson, marti qaadna u fidiyay.
Maxa Sababay Gacan Dhaafki Beyonce Walaasheed Iyo Jay Z?
Isbuuci lasoo dhafay waxa la sii daayay muuqaal eey Beyonce walaasheed Solange Knowles u gacan qaadeyso Jay Z marey ka baxayeen xafladii Met Gala 2014. Arintan ayaa iskugu soo biyo shubatay markey soo baxen warar lagu kalsoonyahay oo sheegay iney arinta ka bilaabatay Beyonce. Xaflada intii lagu sugna ayaa Jay Z wuxu si aad ah ugu dhawaadey oo hadalo shukaansi ah dhaafsaday haweeney lagu magacabo Rachel Ray. Waa naqshadeeye uu qabi jiray nin gacansi ka dhaxeeyo Jay Z oo lagu magacaabo Damon Dash. Beyonce ayaa arintan u adkeysan weysay ayadoo Rachel Roy ku tiri, 'naga dhex bax aniga iyo ninkeyga oo amaanka nasii. Jay Z ayaa ka carooday oo hadalo aan wanagsaneyn ku yiri Beyonce, isla markiiba waxa soo galay Solonge Knowles oo Jay iyo Rachel ceey kala daashay. Markii wiishka lasoo galayna gacan qaad ku bilowday Jay Z, taas ayaa sababtay in Beyonce gacan fidin. Beyonce iyo Jay Z ayaa kala baabuur raacay markey kasoo baxeen hodheelka. Waxa xusid mudan in laga ceeriyay shaqada ninkii sii dayay video-gii laga duubay dagalki wiishka ka dhacay asagoo uga gatay TMZ $250,000 lacag gaareysa.
Muuqaalkii Michael Jackson Oo Lagu Soo Dhigi Doono Xaflada Billboard Music Awards.
Michael Jackson oo sanado sii mootana hada ayaa lasoo bandhigi doona caawa muuqaalkisa xaflada Billboard Music Awards. Michael ayaa sawirkisa oo caadi u dhaqaaqaya waxa lasoo saari doona masraxa habeenkas asoo ku luqeyn doona heesta 'Slave to the Rhythm' oo ka mid ah albumkisi isbuuci hore lasii daayay ee Xscape. Ma ahan sheeko cusub oo hada ka hor ayaa xaflada Coachell kasoo muuqday Tupac Shakur sanadkii 2012. Teknolojiyad ayaa la dhaha Hologram ayaa laga sameeya projector oo dhowr meel looga ifiyo masraxa taasoo muujinaya sawirka qofka.
Nin Isku Dayay Inuu Hoos Ka Galo Cambuurkey Xirneyd America Ferrera.
Nin ka mid dadkii ka soo qayb galay xaflad cannes festival ee dalka france ayaa ka yaabiyay dunida oo dhan ka dib markii uu isku dayay inuu hoosta ka galo cambuurka actarada America ferari taa oo tagneed rooga gaduudan . Waaxda amniga ayaa durbadiida soo gaaray iyagoo dambiilaha gacanta ku dhigay lamana oga ilaa iyo hada waxa ku kalifay ninkaan arintaan mar la waraystay actarada jishay filimka ( how to train your dragon ayaa sheegtay in arinkaan uu fajiciso ku noqday . Maaha markii ugu horaysay uu qof isku dayo inuu qash qashaado actariinta ku taagan ruuga daduudan.
Nin Saudi Ah Oo Xaaskisi Furay Kadib Markey Waday Baabuur.
Haweeney Saudi ah ayaa ninkeeda furay kadib markey u dirtay video tusinaya ayadoo baabuur magaalada ku dhex wadeysa. Haweeneydan ayaa ka aheyd in kaga farxiso taasoo aheyd markii ugu horeysay oo eey baabuur wado laakinse heeshay 3 dalqo ayadoon gurigeeda imaan. Waxa baabuurka la saarna wiil walaasheed dhashay asagoo ka duubay video-ga kasoo eey ugu dirtay Whatsapp. Ninkeeda ayaa aad uga xanaqay markuu arkay naagtisa oo suuqa baabuur ku wadeysa isla markana eysan usii sheegin iney baabuur wadi doonto. Ma uusan dilin haweeneydisa mana caayin oo si tartiib ah ayuu u furay asagoo ka codsaday iney la joogto hooyadeed inta uu maxkamada ka dhameynayo furninkas. Dad badan ayaa aad uga soo hor jeestay halka kuwo kale ku raaceen ninka Suadi-ga arintan.
Shirkada Sameesay Baabuurku Ku Dhintay Pual Walker Oo La Dacweeyay.
Haweeneydu ka dhintay saaxiibkii Pual Walker ayaa ku oogtay dacwad ka dhan ah shirkada sameeysay baabuurku ku dhintay. Baabuurka uu ku dhintay ayaa ahaa nooca Porsche ee soo saarto German. Kristine oo ah quftuu ka dhintay Roger Rodas saaxiibkii waday baabuurku ku dhintay Pual Walker ayaa ku andaconeysa in baabuurka sababta ah oo cilad lahaa. Pual iyo saaxiibkis oo asna ku dhintay baabuur 2005 Porsche Carrera GT ayaa ku soconaya xawaare dhan 55MPH (88KMH) inteysan shilka galin oo labadoodaba nafta ku waayin. Dacwadan ayaa sheegeysa in baaburka cillada keenay oo ayaga xawaarahey ku soconayeen uu caadi ahaa
Nin Hindi U Dhashay Oo Calooshiisa Laga Soo Bixiyay 400 Gram Oo Dahab Ah.
Dhaqaatiir ka shaqaysa Isbitaal ku yaal Caasimada India ee Delhi, ayaa BBC-da u sheegay, in nin dalkaas u dhashay oo ay qaliin ku sameeyeen Calooshiisa ay ka soo saareen Dahab dhan 400gram. Ninkan Calooshiisa laga soo saaray Dahabka oo 63 sano jir ah, ayaa dhaqaatiirta u sheegay inuu dhib ku qabo Saxarada. Ninkan ayaa dhaqaatiirta qaliinka ku sameeysay u sheegay, inuu liqay dhalo Dahab ah kadib markii uu muran dhex maray isaga iyo Xaaskiisa, dalka India oo ah dalka ugu badan ee Caalamka u dhaafiya Dahabka, ayaa waxaa la canshuuraa Lacag aad u farabadan. Mid kamid ah dhaqaatiirta qalay Ninkan, ayaa BBC-da u sheegay in waligiis uusan la kulmin xaalad nuucaan oo kale ah. Waxa uu sheegay in waligiis uusan qaliin ku sameynin qof liqday Dahab, waxana uu sheegay in qaliinka ay ku sameeyeen ninkaan uu qaatay mudo 3 saacadood ah.
Gabar Kenyan Ah Oo Sixir Darteed Qodxo Jirkeeda Ugu Soo Baxaan.
Cunug 17 sanno jir ah oo la sixray ayaa qodxo jirkeeda ka soo baxayaan, maalinba maalinta ka dambaysa tirada qodxahana jirkeeda kasoo baxayaan way sii kordhayaan iyadoo ay gaareen 130. Dhacdadani waa kaa yaabinee waalid ahaan, adiga, deriska iyo xataa hoggaamiyaasha degaankaaga. Tani waa xaalad dhab ah oo ku habsatay mid ka mid ah qoysaska ku nool degmada Kericho, kaddib markii gabartoodaa uu ku dhacay cudur lala yaabay, lagana argagaxay, waana cudur la hubsaday inuu ku riday sixir lagu sameeyay. Waa cudurka qodxo ka soo saaraayo jirka. Waxaan kaaga digaynaa in muuqaalka qaarkood ay ku wareerin karaan. Winnie Korir oo ah bukaanta hooyadeed oo u warrantay Alfonso Olaladipo waxay sheegtay in cudurkani uu gabarteeda ku bilawday bishii 8aad 2013, ayna tageen isbitaalka Kericho, lana sameeyay x-ray ama fallaar eegto, waxba aan laga arag.
Pharrell Willeams Oo Ku Dhex Ooyay Barnaamijka Oprah Ee OWN.
Heesaaga caanka ah ee Pharrell Willeams ayaa mar kale ilmeeyay xili uu marti ku ahaa barnaamijka OWN ee ay daadiso maalqabeenada Aprah Winfrey. Happy Makes ayaa wuxuu la ilmeeyay markii ay Oprah u shiday heestiisa caanka ah 24 hrs of Happy oo clips loo sameeyay ay ku wada ciyaarayaan dad kala duwan oo adduunka ku nool oo midib walba leh iyo diin walba. Heestaan ayaa dalka Ingiriiska ka dhalisay dood badan, maadaama ay ka dhex muuqdaan dad Muslimiin ah, heestaana aysan aheyn mid Muslimiinta ogoleyn, balse wax dhibaato ah aysan ka muuqaan, maadaama ay ka hadleyso isdhexgalka.
Heesaaya Caanka Ah Selena Gomez Oo Xiriirka U Jartay Waalidkeed.
Fanaanadda caanka ah ee Hollywood Selena Gomez ayaa xarigga u jartay hooyadeed iyo aabaheed ka dib markii ay ku eedeysay inay culeys iyo cadaadis badan kaga yimid, Selena ayaa sheegtay in ay waalidkeed ay si xad dhaaf ah usoo fara gashadeen arimaheeda hoose iyadoo ku eedeysay inay kala hadleen arimaha saaxiibtinimo ee dhex yaalo iyada iyo Justin Bieber iyagoo ka siiyay talo iyo waano aysan jecleysanin. Selena ayaa saaxafadda adduunka maalmaha ka qorayeen inay uur leedahay.
Jilaaga John Bennett Oo Meydkiisa Laga Helay Qol Uu Deganaa.
Jilaaga ku caan baxay filimada qosolka ee reer Mareykan John Bennett Perry ayaa meydkiisa laga helay qol uu ka deganaa Hotel, eyadoo la sheegay in asbaabo dabiiciya uu u geeriyooday. Madaxa shaqada John Bennett ayaa xaqeejiyay geerida jilaaga, isagoo tilmaamay in xanuun dhanka sambabaha ah uu u geeriyooda, baaritaano badan oo lagu sameeyay waxey muujiyeen in qaab dabiiciya jilaagu u dhintay. John Bennett oo 50-sano jir ahaa, waxa uu caan ku ahaa ka qoslinta dadka, iyo jilida filimada musalsalka ah.
Jennifer Lopez Iyo Pitbull Oo Wada Qaadi Doono Heesta Koobka Adduunka.
J Lo iyo Pitbull ayaa nasiib u yeeshay inay si wada jir ah u qaadaan heesta lagu furi doono koobka cayaaraha adduunka ee sanadkaan (FIFA World Cup 2014) oo lagu qaban doono dalka Brazil, We Are One (Ola Ola) ayaa maqli doontaa haddii aad xiiseyso ama daawato cayaaraha kubadda cagta. Jennifer Lopez iyo fanaankii reer Miami ee asalkiisu yahay Cuba ayaa heestan music-keeda looga soo aruuriyay heeso badan oo ay ka mid tahay heestii Wavin Flag ee uu qaaday fanaanka Soomaaliyeed ee reer Canada sanadkii 2010 koobkii lagu qabtay South Africa. HEESTII WE ARE ONE OLA OLA
Halle Berry: Waan Jecelahay Nuujinta Dabiiciga Ah.
Waxa ay sheegtay xiddigta caanka ah ee Halle Berry iney jeceshahay nuujinta dabiiciga ah ee caruurta, eyadoo tiri waxaa iga dhaca miisaanka i fuulay intaan uurka lahaa markaan si dabiiciya u nuujiyo canugeyga. Halle Berry oo dhashay October 2013, ayaa xaqeejisay iney ka hesho nuujinta dabiiciga ah faa'iido badanna leedahay, xili ay la hadleysay Barnaamijka Extra ee America. Waxey intaas ku dartay Halle Berry "hooyo kasto si dabiiciya ha u nuujiso canugeeda, waa jidka ugu fudud oo ay kusoo celin karto miisaankeedi hore.
Dhaawaca Pique Oo Fursad U Noqday Shakira.
Laacibka daafaca uga ciyaara kooxda Barcelona ee Gerard Pique ayaa dhaawac kasoo gaaray kulanki kooxdiisu la ciyaartay Arbacadi kooxda Atletico Madrid kulan ka tirsan lugta hore ee wareega 8da Champions League, eyadoo la shaaciyay in mudo bila uu garoomada ka maqnaa doono. Pique waxuu ka maqnaa doonlaa lugta labaad ee Atletico iyo Barcelona, sidoo kale fiinaalka Copa del Rey ayuu seegi doonaa, oo 16-ka bishaan la ciyaari doono, laakiin taas bedelkeed wuxuu fursad u helay inuu wehliyo saaxibtii Shakira iyo wiilkooda Milan. Fursad wanaagsan ayey u tahay Shahkira arintaan, maxaa yeelay waqti fiican mawada qaadan waayadaan eyada iyo saaxibkeed Gerard Pique.
Gacaliyaha Rihanna "Drake" Oo Hees Shukaansiya U Diray Jennifer Lawrence.
Fanaanka ku luqeeya heesaha Rapp-ka ee Drake oo ah gacaliyaha cusub ee Rihanna, ayaa fariin shukaansiya u diray Jennifer Lawrence oo kamida xiddigaha Hollywoodka, fariinta oo ah heestiisa cusub ee Draft Day. Waxaa fariinta Drake laga dhadhansaday inuu doonayo xiriir dhex mara isaga iyo Jennifer Lawrence, taas oo dad badan la yaab ku noqotay. Waxaa hada indhaha warbaahintu ku fooraraan jihada Rihanna, eyadoo la sugaayo jawaabta ay ka bixiso arintaan, maadaama la ogyahay in Drake iyo Rihanna dhawaan axdi wada galeen.
Ahlam Oo Ku Dhawaaqday Iney Fanka Ka Fadhiisaneyso.
Fanaanada reer Imaaraad ee Ahlam Al-Shamsi ayaa ku fikireysa iney ka baxdo saaxada fanka kadib guulo badan oo ay ka gaartay, sababta ugu weyn waxey ku sheegtay in carurteedu koreen sidaas darteed ay aad u baahanyihiin. Waxey intaas ku dartay Ahlam, waxaa suura gala inaan goor dhow joojiyo heesaha, maalinta aan go'aansado waxaan ka fogaa doonaa dhamaan goobaha fanka. "Waxaan xiri doonaa albaabada leygu yaqaano, waxaan fadhiisa doonaa minankeyga si aan warbaahinta iskaga qariyo, sidaas waxaa tiri Ahlam oo aan sheegin waqtiga rasmigaa ay fanka ka fadhiisanaeyso.
Selena Gomez Iyo Justin Bieber Oo Rajeynaya Iney Caruur Isku Dhalaan.
Selena Gomez iyo Justin ayaa beeniyay warar been abuura oo sheegayay in Selena Gomez uur u leedahay saaxibkeed Justan, eyadoo sawirkeeda lagu faafiyay goobaha bulshadu ku kulmaan. Warar ku dhaw-dhaw labada fanaan ayaa wax kama jiraan ku sheegay arintaan, laakiin Justin iyo Selena waa rajeynayaan iney caruur isku dhalaan waqti dhaw. Waxaa xusid mudan in xiriirka Selena iyo Justin uu yahay mid aan fadhin eyagoo kala tegay dhawr jeer, laga soo bilaabo tan iyo markii ay xariirka bilaabeen 2011.
Chris Evans Oo Ka Fadhiisanaya Filim Jilida.
Isagoo horay u sheegay Chris Evans inuu ka nasanayo filim jilida,bedelkeedna uu tijaabinayo majaalka soo saarida, ayaa hada waxa uu u muuqdaa inow si guud uga fasiisa raba filim jilowga. Wareysi uu bixiyay Chris Evans waxa uu ku sheegay in si guud uu uga fadhiisanayo filimada, xoogana uu saari doono wax soo saarka, intaas waxa uu sii raaciyay in weli heshiis uga dhimanyahay filimada Marvel, sidaas darteed uu jili doono. Waxaa xusid mudan in heshiiska Evans ee shirkada Marvel uu ku egyahay 2017, waxaa sidoo kale laga yaabaa in heshiis cusub loo bandhigo.
Kim Kardashian oo soo bandhigtay Taashkeeda Arooska.
Xiddigta caanka ah ee Kim Kardashian ayaa soo bandhigtay Taashka guurkeeda, eyadoo weliba la sawiran xaajigeeda Kanye West, waxaana sawirkooda lasoo saaray majalada Vogue. Kim ayaa mudo dheer ku riyooneysay in maalin ay aragto eyadoo xiran labiskaan, duqeeda Kanye West isna uu garab joogo. Wxaa xusid mudan in Kim iyo Kanye qorsheynayaan aroos weyn waqti aan fogeyn, kaas oo lagu qaban doono magaalo madaxda France ee Paris.
Angelina Jolie iyo Brad Pitt oo ku balamay guur Taariikhi ah.
Mudo dheer kadib waxey ku dhawaaqeen lamaanaha Hollywoodka ee Angelina Jolie iyo Brad Pitt, xiliga guurkooda rasmigaa uu dhacaayo, mid kamida wargeysyada Mareykanka ayaa lugu xusay in xaflada Jolie iyo Brad ay dhici doonto 24-ka May ee sanadkaan. Wargeyska ayaa tilmaamay in arooskaan taariikhiga ah ay kasoo qeyb geli doonaan dad gaaraya 200 oo ruux, laakiin si cad uma sheegin magacyada dadka soo xaadiri doona. Waxaa xusid mudan in Angelina Jolie iyo Brad Pitt isku leeyihiin xiligaan lix caruura, oo sedax kamida eyagu dhaleen.
Justin Bebar Oo Ubax Qiimihiisu Yahay 10-Kunn$ Gudoonsiiyay Selena Gomez.
Fanaanka caanka ah ee Justin Bebar ayaa hadiyad ahaan u siiyay saaxibtii Selena Gomez Ubax qiimihiisu yahay 10-kun oo Dollar, isagoo u muujiyay in wax walbo darteed uu u sameynayo, kadib mashaakil badan oo ka dhax dhacay labadooda.
Tan iyo markii xiriiroodu soo bilowday 2010-ki, waxa ay kala tageen Justin Bebar iyo Selena Gomez dhowr jeer, marki ugu dambeysay waxey eheed bilowgi sanadkaan, laakiin mar kale ayey isku soo laabteen sida lagu qoray wargeyska “contact music”.
Isku soo noqoshada labada fanaan waxaa markaan sabab u ah Justin oo dhowr jeer fariin u diray Selena ka hor inta aysan wada kulmin.
Lady Gaga Oo Labis Lala Yaabay Soo Xiratay Xili Ay Marti Ku Eheed Barnaamijka Jimmy Kimmel.
Fanaanada iska yaabika badan ee Lady Gaga ayaa marti u noqotay barnamijka ” Jimmy Kimmel Live” eyadoo sida caada u ah soo xiratay labis layaab leh, waxeyna ku kaftantay waxaan labiskaan usoo xirtay inaan ku qariyo kilaadkeyga oo beryahaan siyaaday.
Lady waxa ay daaha ka qaaday in dharkaan uu sameeyay Gareth Pugh, waxaana la socda sida ay sheegtay kobo aad u waaweyn.
Dhanka kale waxaa weerar ku qaaday Lady Gaga fanaanada Demi Lovato, taas oo tilmantay in waxa Gaga sameyneyso aysan eheyn wax la qaadan karo fankana kamida.
Jilaa Barkhad Abdi Oo Caawa Sanka U Saaran Inuu Qaato Abaalmarinta Oscars-Ka. Ma Daawan Doontaa Adigana?
Caawa oo axad ah ayaa waxaa adduunka dhan la wada daawanayaa munaasabadda Oscars ee abaalmarinta ugu sareysa Hollywood uuku dhiibo jilayaasha iyo aflaamta ugu wanaagsan waxaana Soomaaliya halkaasi caawa u jooga Barkhad Abdi oo ah jilaa.
Barkhad ayaa u sharaxan abaalmarintani kadib markuu si aan caadi aheyn u jilay doorka aktarka labaad ee filinkii Captain Philips ee laga matalay qisada burcad badeeda Soomaalida ee afduubtay kabtankii markabka Mearska Alabama ee lagu qabsaday xeebaha badweynta India sanadkii 2009.
Hadaba caawa waxey munaasabada Oscars 86 aad ku beegantahay xiliga saqda dhexe ee magaalada Hollywood ku yaala ee Los Angeles,iyo xiliga habeenka dambe ee Yurub iyo Africa, waxaana la wada sugayaa dunida oo dhan inta jilaa ee guriga ula hooyan doonta abaalmarintaan, Hadada Tv ga shido caawa taageer Barkhad Cabdi oo aan u rajeyneyno inuu ku guuleysto abaalmarintan.
Barkhad ayaa hore ugu guuleystay abaalmarinta weyn ee Bafta award oo uu Biritiishka baxiyay.
Rihanna Oo Ka Yaaban Maseyrka Mila, Iyo Ashton Oo Sheegay Inuu Xiriirka U Jaray Rihanna.
Xidiga caanka ah ee Ashton Kutcher ayaa ogoladay in xiriirka uu u jaro fanaanada Rihanna, kadib dalab kaga yimid gacalisadiisa Mila Kunis, waxaana Ashton xiriir la samey karaa Rihanna hadii ay ogolaato Mila.
Mila Kunis ayaa dhawaan ku dhawaaqday iney u alkumantahay fanaanka Ashton, eyadoo sidoo kale sheegtay ineysan raali ka eheyn xiriir ka dhexeeya duqeeda iyo Rihnna.
58 YEAR OLD SOMALI MODEL IMAN COVERS SCENE MAGAZINE MARCH 2014 ISSUE
Iman still has it, at the age of 58. She is considered one of the most beautiful models of all time. Iman says it took years of studying how a fashion shoot works to become a pro at modeling. “I learned on the job,” she explains. “I paid attention to details. I looked at old photographs. And I made sure that I had control over my image. I’ve always believed that images are a model’s currency. So I always wanted to have some control and have a say about my images. What I know is that photography and the business of images is a mirror in which we see ourselves—who we are and who we can be. Beauty is a powerful commodity, and its currency is identity.” Photographer Douglas Friedman recently captured the Somali Model for Scene magazine’s March cover story and proved that once again. “It’s thrilling to work with such a legend – the most important photographers of our time have worked with her,” Friedman told Bernstein & Andriulli. Iman’s path to lifestyle guru has forged the way for many other famous faces like Tyra Banks and Heidi Klum to create a career post modeling. She has been showered with numerous accolades for both her personal style and business acumen. In just the last few years alone, she has been honored with the coveted CFDA Fashion Icon Award in 2010 and the Hall of Fame Award by the Accessories Council in 2013, selected by the Business of Fashion as one of the 500 Most Influential People and honored by BRAG (Black Retail Action Group) in 2013.
Abdi was nominated for best supporting actor for his portayal of a Somali pirate in the movie “Captain Phillips” in his Hollywood acting debut. The home opener festivities are many, as is tradition with the Twins. They start with a free Breakfast on the Plaza, then Twins legends Bert Blyleven, Tony Oliva, Kent Hrbek and Tom Kelly will greet fans as they arrive at the gates. The national anthem will be performed by Twin Cities stage actress and singer Thomasina Petrus.
Abdi has also been tapped recently for public appearances and broadcast pitches to help MNsure in its push to get uninsured Minnesotans enrolled in a health plan.